Ny valan-javaboary tsara indrindra any Etazonia | Vaovao momba ny dia
Maria Jose Roldan | | America, Ocio
Raha misy zavatra mampiavaka an'i Etazonia amin'ny fotoanan'ny hafanana dia ireo valan-javaboary misy lohahevitra io, manana kalitao maro sy tena tsara izy, saingy toa tsy ampy izany, dia misy valan-javaboary izay be mpitsidika indrindra eto an-tany . Ireo zaridainan'ny rano any Etazonia ireo dia azo tsidihina amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona satria manana serivisy manokana hisorohana ny hatsiaka izy ireo.
Fa rehefa miakatra ny hafanana dia tsy misy zavatra tsara sy mamelombelona kokoa noho ny milomano anaty dobo filomanosana. Na dia dobo aza ny fandroana dia tena mamelombelona, ​​matetika koa ny olona dia mitady fihetsem-po. Raha handeha hitsangatsangana any Etazonia ianao ary te handresy ny hafanana ary hiala voly koa, dia tsy hadino ity lisitr'ireo zaridaina rano tsara indrindra any Etazonia ity.. Hahafinaritra ny fiainanao ary hifalifaly toy ny hoe zaza indray ianao. Toy ny tsy ampy izany, ny valan-javaboary dia manintona mahasarika fo ary koa manome fahafinaretana ho an'ny fianakaviana. Manomboka amin'ny sisin-dranomaso mankany amin'ny rano dia tsy azonao adino ny zorony rehetra.
Ny Fiaran'i Noa na Noa Ark
Ity valan-javaboary ity dia ao Wisconsin Dells ary io no zaridainan'ny rano lehibe indrindra eto amin'ny firenena, antsoina hoe Noa Ark noho io antony io ary miaina mifanaraka amin'ny anarany miaraka amina toerana manintona rano maro be izay maka aina rehefa vantany vao miditra ianao teo am-baravarana. Kaonty tsy misy hafa noho ny Slides 51, dobo onja roa ary simulator surf.
Manolotra hetsika ho an'ny fianakaviana iray manontolo ihany koa izy io, fa raha mpikaroka mahafinaritra ianao dia afaka mandeha amin'ny lalao goavambe, ao anatin'izany ny rambon'ny maingoka izay mandefa mpizahatany midina slide izay saika mitsangana ao anaty tadiny mirona. Azonao atao koa ny mamakivaky ny Black Anaconda, izay toy ny roller coaster amin'ny rano ary mahaliana indrindra any Amerika.
Toy ny hoe tsy ampy koa izany manana trano fisakafoanana mahafinaritra ianao hamerenana ny baterinao ary afaka mihinana sakafo eo an-toerana toy ny curd fromazy na mahita ny saosy mahafinaritra sy tsy azo averina. Tsy isalasalana fa ity valan-javaboary ity dia iray amin'ireo soso-kevitra hitsidika indrindra.
Ity valan-javaboary rano ity dia miorina ao amin'ny tanànan'ny Kansas ary ho talanjona ianao amin'ny diany avo. Izy dia manana iray antsoina manokana hoe Verruckt, izay avo indrindra indrindra eto an-tany ary hampiala ny fofoninao alohan'ny hitsoranao azy. Izy io koa dia manana slide maromaro izay ahafahan'ny mpizahatany mitsambikina miaraka amin'izay mahatratra haingana be izy ireo.
Fa raha tsy avo loatra ianao ary aleonao mijanona amin'ny haavon'ny ranomasina, ity valan-javaboary ity dia manome anao ony ony mahafinaritra koa hankafizanao ny rano. Afaka mankafy onja toy ny any anaty ranomasina misamboaravoara koa ianao ary mitsambikina amin'ny lohasaha na mankafy valan-javaboary mahafinaritra mihitsy aza.
Ho fanampin'izay, raha tsy ampy izany dia afaka mitady bara ao amin'ny pisinina ianao hanana fotoana hialana sasatra amin'ny rano mafana mandritra ny fisotroana zava-pisotro manampy anao hamenoana ny baterinao alohan'ny hanohizanao ny dia ataonao ao amin'ity valan-drano ity.
Tontolo anaty rano o rano World
Ity valan-javaboary ity dia any Denver no misy azy Mahasarika fety ny fisarihana rano 40 sy ny Andro eran-tany ho an'ny rano ho fahatsiarovana ny maha-zava-dehibe ny rano. Ny Mile High Flyer dia mpitaingina rano manidina ary iray amin'ireo manintona kintana amin'ny valan-javaboary noho ny hafainganana sy ny tanjany
Ny tafio-drivotra dia fitifirana tsy manam-paharoa amin'ny mitaingina rakitry ny toerana izay midina fantsona amin'ny maizina ireo mpanamory toerana misy oram-baratra mahery aorina. Ny mpitsidika dia mazoto mankafy azy satria kotroka mafy, jiro, orana no atsangana ary izany rehetra izany dia mahatonga ny mpizahatany mahatsiaro ho very hevitra sy misavoritaka.
Raha liana amin'ny hafainganana ianao dia tsy ho azonao atao ny tsy mamaky ny Turbo Racer izay tsy maintsy ho hitanao rehefa miditra amin'ny valan-drano ianao ary manomboka mahita izay rehetra ananany ho anao.
White rano Park
White rano Park afaka ahitanao azy Branson, . Ity zaridainan'ny rano ity dia kely kokoa noho ireo valan-javaboary hafa manana ireo toetra ireo toa ireo voalaza etsy ambony ireo, saingy tsy hamela anao tsy hiraharaha ny zavatra rehetra atolotra azy io. Ny ranony fotsy dia manonitra ny habeny ary manana manintona tena voarindra tsara koa izy, ary ny zavatra tsara indrindra ... dia ny fananany hetsika ho an'ny fianakaviana iray manontolo, ary koa ho an'ny ankizy kely.
Misy slide antsoina hoe KaPau izany dia manana razambe mitete 70 degre ary miaraka amina fihodinam-bolo izay hanala ny fihirana anao. Saingy manana ny mahasarika azy ireo amin'ny sokajin-taona rehetra koa izy ireo, koa afaka mankafy ianao, ohatra, Splashaway Cay miaraka amin'ny geyser sy mpitifitra rano izay hanampy anao hankafy ny zorony tsirairay. Saingy misy zavatra izay miantso matetika ny mpizahatany ho any amin'ity valan-drano ity fa tsy mankany amin'ny iray hafa, ary izany ny fandaharam-potoana. Mandritra ny volana Jolay sy Aogositra dia misokatra hatramin'ny XNUMX alina ny valan-javaboary fialamboly manomboka amin'ny alakamisy ka hatramin'ny asabotsy.
rano Firenena USA
Ity valan-javaboary fialamboly ity dia any Williamsburg, Virginia ary iray amin'ireo valan-javaboary tsara indrindra azonao jerena ankehitriny. Hamela anao hankafy ny traikefa amin'ny tsy fahampian'ny lanjany amin'ny sasany amin'ireo manintona azy toy ny hazakazaka mitsivalana midina amin'ny havoana iray hiverina avy hatrany amin'ny rindrina mitongilana goavambe izay haka aina. Azonao atao ihany koa ny mandeha miaraka amin'ny namanao telo any Aquazoid izay natao ho an'ny sahy indrindra.
Ny valan-javaboary fialamboly dia ho an'ny sahisahy indrindra ary afaka mankafy ny moron-dranomasin-drano ianao. Mazava ho azy fa zaridaina mahafinaritra ho an'ny olona tia mankafy ny rano sy ny masoandro koa izy io. Azonao atao ny mankafy sy miala sasatra manodidina ny manintona, ny traikefa nahafinaritra ary ny hetsika atolotray anao. Azonao atao koa ny mankafy sy anisan'ny seho mivantana izay miseho amin'ny fotoana samihafa, mety ho an'ny ankizy.
Ankehitriny tsy manana fialan-tsiny ianao, manana lisitra tsara ianao hisafidiananao ny valan-drano mifanaraka amin'ny toetranao na ny tombontsoan'ny fianakavianao, hankafizanao azy amin'ny fomba lehibe!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Ocio » Ireo valan-javaboary tsara indrindra any Etazonia